सांसदकी छोरी मिस नेपाल भई भनेर हल्ला गर्नुको औचित्य देख्दिनँ -श्रृंखला खतिवडा | mulkhabar.com
April 22, 2018 | 6:22 am 734 Hits
मिस नेपालमा भाग लिने सोच कहिलेबाट र कसरी आयो ?
सानैदेखि मिस नेपाल प्रतियोगिता राम्रो लाग्थ्यो । मेरो बच्चादेखिकै रहर पनि हो । मिस नेपाल भएपछि सबैले चिन्छन् भन्ने मनसाय थियो ममा । बिस्तारै बुझ्दै जाँदा सबैले चिन्ने मात्र नभएर मिस नेपालको आवाज पनि बलियो हुँदोरहेछ भन्ने थाहा भयो । त्यसले गर्दा मिस नेपाल हुन्छु भन्ने संकल्प कसेँ । त्यहीअनुसार आफूलाई क्षमतावान बनाएँ । पूर्वयोजनाका साथ यो वर्ष भाग लिएकी हुँ ।
पूर्वयोजना कस्तो थियो ?
म आर्किटेक्चरको विद्यार्थी हुँ । ब्याचलर पढ्दादेखि नै मिस नेपालमा भाग लिन्छु भन्ने सोच बनाएकी थिएँ । ब्याचलर सक्दा २०१८ को मिस नेपालमा भाग लिन पाउँथेँ । यही नै पूर्वयोजना हो ।
मिस नेपालमा भाग लिन जान्छु भनेर परिवारलाई कहिले भन्नुभयो ?
मेरो रहर छ भनेरचाहिँ थाहा पाउनुभएको थिएन । भन्न त पहिलादेखि नै आमालाई भनिरहेकी थिएँ । तर, उहाँलाई म जिस्किएकोजस्तो लागेको रहेछ । मैले उहाँलाई मनाइरहेँ । आमाले नै बाबालाई मेरो इच्छा सुनाइदिनुभयो ।
परिवारले सहजै स्वीकार गर्नुभयो ?
खासमा आमाबाबाको मिस नेपाल ग्ल्यामर फिल्ड हो भन्ने बुझाइ थियो । त्यति नै वेला पूर्वमिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठले विद्याभूषण जितेपछि उहाँहरूलाई सम्झाउन सहज भयो । मिस नेपाल भनेको ग्ल्यामर मात्र नभएर अवसर पनि हो । म फेमका लागि नभएर प्लेटफर्मका लागि जान लागेको हो भनेँ। त्यसपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो । साथ पनि दिनुभयो ।
उपाधि जितेपछि आमा–बुवाको प्रतिक्रिया कस्तो आयो ?
एकदम खुसी हुनुहुन्छ । आमा देशबाहिर हुनुहुन्थ्यो, बुवाचाहीँ यहीँ । आमासँग मिस नेपाल भएको एक हप्तापछि मात्र भेट भयो । अगाडि फोनमा कुराकानी भइरहेको थियो । बुवाले प्लेटफर्मको सदुपयोग गर्नु भनेर सुझाब दिनुभएको छ । मेरो जितले उहाँहरू गौरवान्वित हुनुहुन्छ ।
कम्युनिस्ट सांसदको छोरी मिस नेपाल भई भनेर चर्चा भयो, कस्तो लागिरहेको छ ?
यो कुरा मलाई चित्त बुझिरहेको छैन । किनभने मैले आफ्नो पहिचानका लागि मिस नेपालमा भाग लिएकी हुँ । पहिचान बनाउन पनि सफल भएँ । सांसदको छोरी हुनु मेरो रोजाइ होइन । उहाँहरूको रुचि, रोजाइअनुसार राजनीतिमा लाग्नुभयो, सांसद हुनुभयो । उहाँहरू सांसद भएकै कारण म मिस नेपाल भएकी भए जोड्न मिल्थ्यो, तर म मेरो आफ्नो क्षमताको कारण मिस नेपाल भएकी हुँ ।
सांसदकी छोरी मिस नेपाल भई भनेर हल्ला गर्नुको औचित्य देख्दिनँ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको आर्किटेक्चरको टपर हुँ । त्यसैले मेरै क्षमतासँग जोडिएर चर्चा होस् । न कि सांसदकी छोरी भई भनेर विवाद । संसद् भवनमा सांसद विरोध खतिवडाकी छोरी भनेर चर्चा हुनु स्वाभाविक हो ।
तर, मिस नेपाल भएपछि सांसदकी छोरी भनेर जबर्जस्ती आमाबुवासँग जोड्नु ठीक होइन । अस्वाभाविक विवादले मेरो पहिचान बंग्याउन खोजियो । मेरो पहिचानलाई जबर्जस्ती गौण बनाइयो ।
पहिला कम्युनिस्टहरूले मिस नेपालको विरोध गर्थे नि, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
पहिला नबुझेर विरोध भयो होला । मेरो बुवा पनि भन्नुहुन्छ, ‘त्यसवेला नबुझेको कारण विरोध भयो, तर गलत रहेनछ ।’ समय पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । हुनु पनि पर्छ । कम्युनिज्म पनि त फेरिइसकेको छ । पहिलाको जस्तो ‘हाडकोर्ड’ कहाँ छ र रु यसलाई म सकारात्मक मान्छु । प्रगतिशील हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । नत्र त यथास्थितिवादी भइहालिन्छ नि ।
मिस नेपाल भएपछि तपाईंमा के परिवर्तन आयो ?
पहिलो परिवर्तन त पहिला परिवार, आफन्त, साथीभाइमाझ मात्र परिचित थिएँ । अहिले सबै नेपालीले चिन्नुहुन्छ । बाटोमा हिँड्दा पनि ओहो मिस नेपाल भन्नुहुन्छ । व्यस्त दैनिकी सुरु भएको छ । विश्वमा नेपाल चिनाउने जिम्मेवारी थपिएको छ । सबै नयाँ लागिरहेको छ ।
सचेत छु । राजनीति बुझेकी छु । सबैले बुझ्न जरुरी पनि छ । राजनीति एउटा यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जसको माध्यमबाट नीति परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर, आफैँ राजनीतिमा लाग्ने अथवा सक्रिय हुने भन्ने विषयमा चाहिँ सोचेकी छैन ।
अहिलेको राजनीतिक अवस्था कस्तो लाग्छ ?
अहिलेको राजनीति धेरै सकारात्मक भएको छ । हामीलाई विकेन्द्रीकरण चाहिएको थियो, पायौँ । १८ वर्षपछि स्थानीय सरकार बनेको छ । पाँचवर्षे स्थायी सरकार छ । तीन तहको सरकारले मिलिजुली विकास र समृद्धिका लागि काम गर्दै छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार छ । सरकारसँग सबैको पहुँच छ । राजनीतिक स्थायित्व छ ।
‘मिस वल्र्ड’मा नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्छ ?
मिस नेपाल वल्र्ड भएसँगै विश्वमा नेपाललाई चिनाउने ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । मिस वल्र्डमा नेपालले यही स्थान हासिल गर्छ भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ । तर, मेरो लक्ष्य मिस वल्र्डको टाइटल नेपाल ल्याउनेमा रहनेछ । त्यहीअनुसार म कडा मिहिनेत गरेर आफूलाई सक्षम बनाउनेछु ।- नयाँ पत्रिकामा प्रकाशीत